Kitchen Rhythmic | Ota Ward Cultural Promotion Association
Kichin na-acha uhie uhie
Worklọ Ọrụ Music Music Festa <Summer>	Kichin na-acha uhie uhie ~ Site na 0 rue ndi okenye ~ Ka anyi chota uwa ohuru na egwu
Ka anyị sie nri na ụda olu!
Ngwongwo kichin ị na-eji oge niile na-aghọ ihe egwu dị egwu!
"Music Workshop" na Tokyo Bunka Kaikan a mụrụ site na ọchịchọ dị otú ahụ na "Achọrọ m ka ọtụtụ mmadụ dị ka o kwere mee ịnụ ụtọ ịdị ebube nke egwu n'ụzọ dị mfe karị."Ihe omuma a, nke onye obula site na umuaka rue ndi okenye nwere ike isonye na ya, bu ihe omuma nke ndi mmadu nke na-akwalite ihe okike na imekorita site na egwu mgbe ha na-enwe obi uto nke egwu di iche iche.
N'ihi mgbasa ọrịa coronavirus ọhụrụ, akagbuola ọbịbịa Casa da Musica Workshop na Japan.N'ihi nke a, a ga-enwe "Rhythmic Kitchen" maka Satọdee, 7 Julaị.Tokyo Bunka Kaikan Workshop Onye Ndú ga-apụta.Biko mara na a gaghị akwụghachi nkwụghachi maka mgbanwe a.
Satọde, 2021 Maachị 07
19: 00-20: 00 (18: 30-19: 00 nnabata)
* Ngosi ụlọ nnabata
Nkuzi / Onodi (Ndị ọzọ)
Casa da Musica Onodi Onye ndu
Tokyo Bunka Kaikan Workshop Onye Ndú
Bọchị ntọhapụ: Mee 5 (Wenezde) 12: 10 ~
* Releasebọchị mwepụta nwere ike ịgbanwe dabere na ọrịa ọrịa nke coronavirus ọhụrụ.
Ọ bụrụ na mgbanwe, anyị ga-agwa gị na Tokyo Bunka Kaikan na weebụsaịtị anyị.
Idozi ekwentị nnabata 03-3750-1555
Ota Citizen's Plaza, Aprico, Ota Bunkanomori, windo / ekwentị ọ bụla sitere na 14: 00 na ụbọchị mmalite ndoputa.
Talọ Nzukọ Ota Ward Aplico (TEL: 03-5744-1600)
* Enweghị tiketi na-eso ya
Umu akwukwo elementrị to okenye
Ihe dị ka mmadụ iri atọ
Ọrụ Tiketi Cultural Center nke Tokyo (TEL: 03-5685-0650)
Banyere ikere na ogbako a (biko gbaa mbọ gụọ ya)
Tokyo Metropolitan Foundation maka History na Culture Tokyo Cultural Center / Arts Council Tokyo
Embasii nke Portugal
Taito Ward nke Mmụta
Agencylọ ọrụ maka Cultural Affairs Cultural Arts Promotion Nkwado (Ọrụ Nkwalite Nkwalite Ọrụ maka forlọ ihe nkiri, Conlọ Nzukọ Egwuregwu, wdg) | Japan Arts Council
Music Workshop Festa <Summer> ga - eme site na Tọzdee, Julaị 7 ruo Sọnde, Julaị 15.
Biko lee anya n'okpuru ebe a.
Worklọ Ọrụ Music Festa <Summer> Mbanye nke Ndị Soro